Ugcino yokugcina Steel ingqokelela leposi
Indawo yokubeka ingqokelela ikakhulu inesiseko, iiposti ezine, isitya sokuxinanisa kunye neenyawo zokuxinana, zihlala zixhotyiswe ngengeniso yefolokhwe, umnatha wocingo, intsimbi yentsimbi, okanye ipaneli yomthi.
I-pallet rack nayo inokubizwa ngokuba ngumthwalo onzima okanye umqadi, oqulathe izakhelo, imiqadi, ucingo kunye neepaneli zentsimbi.
Umgangatho weMezzanine nawo unokubizwa ngokuba liqonga lensimbi, elonyusa ukusebenza ngokukuko kwendawo yokugcina.
Isakhiwo sesinyithi i-mezzanine sisisombululo esifanelekileyo sokuyila indawo eyongezelelweyo yomgangatho kwisakhiwo sakho esele sikhona. Oku kwenza ukuba ufezekise indawo engenakuphazanyiswa ngaphezulu nangaphantsi enika ukuguquguquka okungenamda ekusebenziseni indawo. Umzekelo, unokufuna ukusebenzisa umgangatho osezantsi weqonga lokugcina, ukuvelisa, ukusebenza okanye ukukha indawo.
Iplatifti yentsimbi idilizwe kwaye kulula ukuyiguqula ubukhulu okanye indawo kunezinye iinkqubo ukufezekisa iimfuno zakho zeshishini kwikamva.
Yonke imigangatho yentsimbi yeMaxrac yentsimbi ye-mezzanine iyilelwe ukuhambelana neemfuno zabathengi kwaye ngokuhambelana nemigangatho yobunjineli. Kwaye ukwenza uyilo lwesisombululo kwiimfuno zakho ezithile nokuba iprojekthi yakho inkulu okanye incinci, ngaphandle kokuphazamisa ukhuseleko kunye nozinzo lolwakhiwo lwemezzanines.
Ipallet yesinyithi ikakhulu ine-pallet umlenze, ipaneli yesinyithi, ityhubhu esecaleni kunye nomda wecala. Isetyenziselwa ukulayisha, ukothula, ukuhambisa kunye nokugcina imithwalo.
I-shelf ye-Longspan nayo ingabizwa ngokuba yishelufu yensimbi okanye i-butterfly hole rack, equlethwe kwizakhelo, iiplanga, iipaneli zensimbi.
Ii-racks ze-Cantilever zikulungele ukugcina izinto ezinkulu nezide, ezinjengemibhobho, intsimbi yecandelo, njl.
Ukuxinana okuphezulu kweDrive kwindawo yokuGcina indawo yokugcina indawo yokugcina izinto
Ukuqhuba ekuRacking kuhlala kusebenza kunye neefolokhwe zokuthatha iimpahla, kuqala ekugqibeleni.
I-Shuttle racking yinkqubo yokugcina uxinano oluphezulu olusebenzisa imoto yokuhamba ngesikhululo sikanomathotholo ukugcina kunye nokubuyisa iipelethi.